तपाई दिनमा कति पानी पिउनु हुन्छ ? « LiveMandu
तपाई दिनमा कति पानी पिउनु हुन्छ ?
८ माघ २०७५, मंगलवार ०२:०४
पानीको मानव जिवनसँग निकै महत्वपुर्ण सम्बन्ध रहेको छ । पानी विनाको जिवनको परिकल्पना गर्न समेत सकिदैन । स्वस्थ शरीरको लागि स्वचछ पानीको आवश्कता पर्दछ । स्वस्थ शरीरका लागि पानी अत्यावश्यक पेय पदार्थ हो । तर, पानीको मात्रा कति चाहिन्छ भन्नेबारे भने धेरै मानिस अनभिज्ञ छन् । शरीरमा जहिले पनि पानीको मात्रा सन्तुलित राख्नुपर्ने हुन्छ ।
दिनमा यति पानी पिउने भनेर कुनै नियम छैन । मानिसको शारीरिक बनावटअनुसार पानीको आवश्यकता पर्छ । सामान्यतया प्यास लाग्दा पानी पिउने गरिन्छ । मानसिक थकान वा तनाव हुँदा पनि छिनछिनमा पानी पिउने गर्छन् । तर, यतिले मात्र शरीरमा पानीको मात्रा पुग्दैन । इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिनले गरेको एक अध्ययनले युवा अवस्थामा पुरुषलाई प्रतिदिन तीन र महिलालाई दुई दशमलव दुई लिटर पानी पिउनुपर्ने बताएको छ ।आफ्नो शरीरमा पानी पुगेको छ वा छैन भन्नेबारे पिसाबबाट थाहा पाउन सकिन्छ । हलुका पहेँलो रङको पिसाबलाई सामान्य मानिन्छ । यदि पिसाब गाढा पहेँलो या सुनौलो रङको देखिएमा पानीको मात्रा नपुगेको बुझ्नुपर्छ । यस्तो वेला पर्याप्त मात्रामा पानी सेवन गर्नुपर्ने हुन्छ । कहिलेकाहीँ भने भिटामिन बी कम्प्लेक्सजस्ता औषधि सेवनको कारण पनि पिसाबको रङ परिवर्तन हुन सक्छ ।
हामीले व्यायाम गर्दा शरीर तात्छ । त्यतिवेला तुरुन्त पानी पिउनु भने राम्रो मानिदैन । यदि पिउनैपर्ने भएमा पनि दुई गिलासभन्दा बढी प्रयोग नगर्दा राम्रो हुन्छ । बिहान उठ्नेबित्तिकै एक या दुई गिलास पानी पिउनुलाई राम्रो मानिन्छ । त्यसपछि खाना खानुभन्दा करिब आधा घन्टाअघि पानी पिउनुपर्छ । खानासँगै पानी पिउनुलाई स्वस्थकर मानिदैन । बरु खाएको एक घन्टापछि पानी पिउँदा हुन्छ ।पानी बढी भयो भने पनि हानि
गर्छ र कम भएमा पनि । बढी पानी पिउँदा हाइपोनट्रेमिया रोग लाग्ने सम्भावना हुन्छ । हाइपोनट्रेमिया रगतमा सोडियमको मात्रा कम भएर लाग्ने रोग हो । त्यसैले शरीरमा आवश्यकभन्दा बढी पानी हुँदा पिसाबका माध्यमबाट नुन बाहिर जान्छ र समस्या निम्तिन सक्छ । यसो हुँदा मिर्गौलामा पनि असर पर्छ । कुनै पनि खाद्यपदार्थबाट थोरै–धेरै पानीको मात्रा पाइन्छ । तर, पानी नपिएर अन्य झोल पदार्थको प्रयोग गर्नुलाई पानी पिएको मानिदैन । कपिपयले पानीको सट्टामा जुस, चिया आदि पिउने पनि गर्छन् । तर, छुट्टै शुद्ध पानी नपिउँदा यसको कमीले गर्मी मौसममा डिहाइड्रेसन पनि हुन सक्छ ।
#तपाई दिनमा कति पानी पिउनु हुन्छ ?